Indawo entle eAtlanterra, eZahara - I-Airbnb
Indawo entle eAtlanterra, eZahara
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguAntonio
I-Apartment ikwimeko egqibeleleyo ebekwe kwindawo engaphambili elunxwemeni, ixhotyiswe ngokupheleleyo, ibandakanya indawo yegaraji kunye namakhadi okufikelela echibini loluntu. Ifakwe kwenye yezona ndawo zikhethekileyo zaseZahara de los Atunes, inendawo ezolileyo kunye neyokuphumla efanelekileyo yokuqhawula ngexesha leholide yosapho.
Ingaphantsi kweemitha ezingama-200 ukusuka elunxwemeni, yindawo ezolileyo yasezidolophini kwindawo yaseAtlanterra, iikhilomitha ezi-2.5 ukusuka kwidolophu yaseZahara de los tunes, kukho iindawo zokutyela, iibhari zaselwandle kunye neebhari ze-cocktail ezinomoya omninzi kufuphi nendawo yokuhlala. Kukho neevenkile ezinkulu kanye ekungeneni, yonke into oyifunayo ukuba ungakhathazeki ngayo nantoni na xa useholideyini.
Yindawo yokusetyenziswa kweeholide ngoko ke umoya uqhelekile kwaye uzolile, kuba umncinci kukho umoya kwii-pubs ezininzi kunye neebhari zaselwandle edolophini.
Ndihlala kwigumbi elikwindawo yokuhlala yasezidolophini, ke ndiya kufumaneka kuyo nayiphi na imibuzo, iingcebiso okanye iingxaki ezinokuvela, ungalibazisi ukuqhagamshelana nam kwaye ndiya kukuvuyela ukukunceda.